Teach Me - Boys Love - Bl - Man Man - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Kụziere m nkezi 4.8 / 5 si 19
NA / A, o nwere ihe nlere 28K
Ha na-ekwu oge nke atọ bụ amara, mana ihe Jaehong chọrọ bụ ọrụ ebube. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ nyocha mahadum mara ugboro abụọ, ọ kpebisiri ike ịga nke ọma ma mesịa nweta ndụ ụlọ akwụkwọ kachasị elu. Agbanyeghị, ọ nweghị ike ịme naanị ya. Onye nkuzi mgbakọ na mwepụ ọhụrụ ya, Han Eunsung, dị ka ọ ga - abụ ezigbo enyi Jaehong. Ihe a bụ… Eunsung abụghị n'ezie onye nduzi Jaehong! Aghọtara nghọtahie ahụ ngwa ngwa, mana nke ahụ anaghị agbanwe eziokwu ahụ bụ na Eunsung bụ onye nduzi kachasị mma Jaehong nwetụrụla. Ugbu a Jaehong nwere ebumnuche ọhụrụ: ime ka Eunsung kwenye ịkụziri ya ihe. Agbanyeghị, Eunsung adịghị oke nkọ ..